Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika dia miantso ny fitarihana mpitarika
Fizahan-tany any Jamaika Minisitra, Hon. Edmund Bartlett, hoy ny areti-mifindra COVID-19 dia nanasongadina ny filàn'ny mpanao politika manerantany hampihatra fomba fitarihana fangorahana kokoa, ary mbola miandrandra fanantenana ihany koa amin'ny hoavin'ny indostria.
Niresaka ny minisitra omaly tao amin'ny Tontolo iray ho an'ny dia hetsika iraisam-pirenena virtoaly, izay nifantoka tamin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fivelaran'ny hetsika fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany.
“Ny fitarihana fangoraham-po mandritra ity fotoana ity dia tsy azo adinina tsara. Io dia nahafahana nahazo fahatakarana bebe kokoa momba ireo olona niasako, nifandray bebe kokoa tamin'ny firafitry ny ekipa, ary koa ho an'ireo mpiara-miasa amiko sy ireo mpitarika hafa. Zava-dehibe koa fa, amin'ny maha-mpitarika antsika, dia mamorona toerana ho an'ny hafa isika hanehoana fiaraha-miory amintsika. Fotoana sarotra izao ary ilaina ny fiarahana miasa mba hahazoana tanjaka ”, hoy ny minisitra.
"Ny toetra mampiavaka ny fitarihana ary tena misy ifandraisany amin'ny fotoan-tsarotra dia ny fahaizana mitandrina am-pitandremana hatrany - tsy tokony hidiran-doza sy hamoizam-po - dia ilaina amin'izao fotoana izao," hoy izy nanampy.
Raha nanontaniana ny amin'ny fomba hanampian'ny governemanta sy izay politika mety hanohanana ny famerenana haingana ity sehatra ity, ankoatry ny fampiasana fonosana fanentanana, dia nanamarika ny Minisitra fa mba hiantohana ny fahasitranana aorian'ny areti-mandringana, dia mila maka sary an-tsaina ny vokatra, serivisy, tsena ary valiny.
“Rehefa nandinika ny tsenanay sy ny fonosinay izahay, ny fampiroboroboana ny toerana haleha dia hipetraka amin'ny eritreritra mitovy amin'izany. Amin'ity vanim-potoana vaovao ity dia voatosika ny olona "hiaina ny fiainany tsara indrindra" ary tokony hiantehitra isika fa ireo mpiara-miombon'antoka sy mpiray antoka amintsika dia nividy ny drafitra mifanaraka amin'izany mba hampiroboroboana ny firindrana sy ny firindrana amin'ny fampiharana ny fahombiazana, "hoy izy.
Ho fanampin'izay, nanamarika ny minisitra Bartlett fa ny COVID-19 dia nametraka ny sain'ny olona voahilikilika amin'ny fiarahamonina sy ny sehatra. "Amin'io lafiny io, ny fampidirana dia nanasongadinana ihany koa ho fitaovana amin'ny fivoahana amin'ity areti-mandringana ity, mety miondrika nefa tsy tapaka, ny fandraisana an-tanana miaraka amin'ireo rohy rehetra ao amin'ny rojo - ny famatsiana, ny marketing, ny fandefasana - dia hilaina indrindra, indrindra satria manolo-tena amin'ny Fandaharam-pampandrosoana maharitra, ”hoy izy.
Ny Minisitra dia niresaka tamin'ny tabilao notontosain'i Guillaume Thibault, Mpiara-miasa amin'ny orinasa mpanadihady iraisam-pirenena Oliver Wyman, niresaka ny lohahevitra "Ny fahaiza-mitarika amin'ny fotoanan'ny Covid-19".
Nanatevin-daharana azy i Gloria Guevara, filoha & CEO an'ny World Travel & Tourism Council; HE Jean-Baptiste Lemoyne, sekreteram-panjakana misahana ny fizahan-tany, France, ary ny Dr. Mario Hardy, tale jeneralin'ny Pacific Asia Travel Association
Nisy mpandahateny hafa tamin'io hetsika io nahitana an'i Hon. Zurab Pololikashvili, sekretera jeneraly, Fikambanan'ny Firenena Mikambana misahana ny fizahan-tany; Rita Marques, sekreteram-panjakana misahana ny fizahan-tany, Portugal ary Ramzi Khoury, Lehiben'ny vaovao, ROYA TV.